Isi nke Semalt
Gịnị ka Semalt na-eme na n'ihi gịnị?
Kedu ka Semalt si enyere SEO aka?
Gịnị bụ Nchịkọta weebụsaịtị
Kedu ka Semalt si enyere aka na nchịkọta weebụ?
Ndị otu Semalt
Semalt bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa zuru oke na-enye ọtụtụ ọrụ iji nyere ndị ahịa aka ịmalite ka ọkwa ọhụụ: AutoSEO, FullSEO, Semalt Web Analytics, Mmepe Weebụ, Mmepụta vidiyo na ọrụ ndị ọzọ.
E hibere Semalt na 2013 ma nwee ihe nlere anya ogologo oge afọ iri n'inyere ndị ahịa aka iru okporo ụzọ na ọkwa dị elu site na iji usoro SEO, nchịkọta na atụmatụ ahịa ahaziri iche.
Semalt na-enyere ndị azụmaahịa aka inwe ọganiihu site na ịbawanye ọkwa SEO ha, site na ịmezi nsonaazụ ahịa ha site na nchịkọta mkpokọ ihu yana site na ịnye ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ dị mkpa nke ọtụtụ azụmaahịa chọrọ maka uto dị ka mmepe weebụ yana mmepụta vidiyo gụnyere vidiyo na-akọwa.
Semalt nwere ebumnuche nke inyere onye ahịa ya ọ bụla aka inweta ọkwa ọganiihu ọhụụ site na ịnye ọtụtụ SEO mmemme mmefu ego na ọrụ ahịa.
Semalt kwuru na ebumnuche ya bụ inyere ndị ahịa ya aka ịbanye na ma Google ma na ndụ. Ọ na-agba mbọ inye ndị ahịa ya ọrụ zụrụ ahịa na ụdị ahịa azụmaahịa nke ha nwere ike mejuputa na mmefu ego ọ bụla.
SEO ma ọ bụ nyocha njikarịcha ọchụchọ bụ naanị usoro nke ịnweta ọtụtụ okporo ụzọ site na nsonaazụ ebumpụta ụwa nke ngwa ọchụchọ.
Igwe nyocha ọ bụla (Google na Bing) nwere ndepụta nke nsonaazụ ọchụchọ mbụ nke gụnyere websaịtị na ụdị ọdịnaya ndị ọzọ dịka vidiyo na post mgbasa ozi mmekọrịta.
Nchọpụta ihe eji achọ ihe bụ usoro ịnweta websaịtị na ọdịnaya azụmahịa iji gosipụta nke ọma na nsonaazụ ndị ahụ. Ọ bụ usoro ga - arụ ọtụtụ ọnụọgụ na-emetụta nhọrọ mkpụrụokwu, ụlọ njikọ, njikarị peeji na ọtụtụ usoro ndị ọzọ na - aga n'ihu.
Na onyonyo dị n'okpuru ebe a, SEO na-ezo aka n'inyere ebe nrụọrụ weebụ gị aka igosipụta na mpaghara "Organic" ebe weebụsaịtị ga-adị elu ozugbo ozugbo etinyechara mbọ SEO mgbe egosipụtara na mpaghara "akwụ ụgwọ" na-akwụ ụgwọ weebụsaịtị nke weebụsaịtị ọ bụla site na ịkwụ ụgwọ kwa-Pịa. Mgbasa ozi (PPC).
Kemgbe 2013, Semalt enyerela ọtụtụ azụmahịa aka iji melite njikarịcha nchọta ha ma nwee ndekọ dị ogologo banyere akụkọ na-aga nke ọma sitere na mbọ ha.
Taa Semalt na-enyere ndị ahịa aka na njikarịcha nchọcha tumadi site na ọrụ abụọ: Auto SEO na SEO zuru ezu, nke edepụtara n'okpuru.
Semalt na-enyekwa ndụmọdụ SEO n'efu iji nyere ndị ahịa aka ịmata ihe mkpa ha dị ugbu a ma kpebie n'etiti ngwugwu abụọ n'etiti ọrụ ndị ọzọ ụlọ ọrụ ahụ na-enye.
Auto SEO bụ ọkwa ntinye Semalt nke SEO nke bụ n'ụzọ bụ isi na-enye ọtụtụ atụmatụ SEO maka ọnụahịa mmalite dị ala. Ọrụ ndị ahụ gụnyere: njikarịcha peeji, ụlọ njikọ njikọta, nyocha isiokwu, nyocha ndozi ihe na ntanetị.
Semalt na-enye nke a dị ka nhọrọ dị mma maka azụmaahịa na-ada n'ala ma ọ bụ na-ejighị n'aka ebe ị ga-amalite site na njikwa ọchụchọ ha. Auto SEO leverage teknụzụ ọchụchọ okpu na-acha ọcha iji nyere aka wepụta weebụsaịtị inweta ọkwa kachasị elu ngwa ngwa.
Ọ na-efu naanị $ 0.99 iji bido ikpe ụbọchị iri na anọ nke Auto SEO, ma site na ebe ahụ, ọnụ ahịa nwere ezi uche na ihe dịka $ 99 kwa ọnwa na ịbelata ego maka ọnwa 3, ọnwa 6, na ịzụrụ kwa afọ.
N'ihi na Auto SEO na-enye ọnụahịa dị ala dị ala, ọrụ a abụrụla nke a ma ama n'etiti ụlọ ọrụ mbido na ndị na-achọ inweta ụzọ azụmahịa mbụ site na njikarịcha nchọta isi ihe na-enweghị enyefe ego dị elu kwa ọnwa nke ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ chọrọ.
SEO zuru oke
SEO zuru ezu bụ nhọrọ nke abụọ dị elu nke Semalt nyere nke na-egosipụta atụmatụ dị iche iche na ọkwa dị elu karịa Auto SEO.
SEO zuru ezu na-enye ngwugwu zuru ezu nke gụnyere: ide ọdịnaya, njikarịcha n'ime ime, idozi njehie weebụsaịtị, ịnweta njikọ njikọta, nkwado na ịgakwa n'ihu yana ọrụ ndị ọzọ ọ bụla ndị ahịa nwere ike ịchọ.
Ndị ahịa SEO zuru oke nke Semalt gụnyere ụlọ ọrụ e-azụmahịa buru ibu yana webmaster ọ bụla na onye malitere ya. Nhọrọ atọ dị maka SEO zuru ezu: mpaghara, mba ma ọ bụ SEO zuru ụwa ọnụ dabere na mpaghara onye ahịa chọrọ ịchọrọ.
Zuru oke SEO bụ ezigbo nhọrọ maka azụmaahịa ndị na-amalite ịbanye na uto ma chọọ ijide n'aka na ebe nrụọrụ weebụ ha na-agbaso ụkpụrụ SEO kachasị ọhụrụ, na-ebelata njehie SEO ọ bụla, yana ndị chọrọ nsonaazụ SEO dị mkpụmkpụ ma dị ogologo.
Ọrụ a dị elu na-enyere ndị ahịa aka ijide n'aka na ọrụ SEO niile achọrọ ka ebili na ọkwa ma nọrọ ebe a na-arụ ọrụ kwa ọnwa: site na njikọ ụlọ na ịmepụta ọdịnaya, ndozi weebụsaịtị, njikarịcha peeji, yana nyocha isiokwu.
Ricnye ọnụahịa maka SEO zuru ezu dịgasị iche dabere na mkpa nke onye ahịa na ọrụ ahụ, yana enwere ike kwenye nkọwa ndị ọzọ gbasara ịnye ọnụahịa site na ịkpọtụrụ otu n'ime ndị nnọchi Semalt.
Nchịkọta weebụsaịtị bụ ụdị data dị iche iche na - ejidere gbasara weebụsaịtị: ma ọ bụ data mpụga gbasara ọkwa ọkwa engineering na ọkwa asọmpi ma ọ bụ data dị n'ime banyere okporo ụzọ, ọnụego ntụgharị, ọnụego bounce, wdg.
Enwere ike iji data a iji melite weebụsaịtị n'ọtụtụ ụzọ. N'iburu n'uche data dị mkpa nke mkpọsa ahịa ahịa dị mkpa, ọ dị mkpa ịdabere na nchịkọta weebụ maka ihe ịga nke ọma ogologo oge na weebụsaịtị.
Ihe atụ nke nchịkọta weebụsaịtị nwere ike ịgụnye ọkwa dị iche iche maka mkpụrụokwu akọwapụtara, ndepụta aha isiokwu ewepụtara maka mkpokọta, mkpesa njikwa peeji, ndepụta nke weebụsaịtị na ọkwa ha, ọtụtụ ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ.
Semalt na-enye aka dị elu nke ngwaọrụ nyocha weebụ ahịrị nke na-enye ndị ọrụ ya aka ịrụ ọtụtụ ọrụ maka azụmahịa ha. Enwere ike nyochaa ọkwa dị mma na ngwa ọrụ ma gosipụta ọhụụ na ntanetị na ịntanetị.
A ga-achọgharị ebe nrụọrụ weebụ na-asọmpi. Enwere ike ịchọpụta njehie njikarịcha peeji. Enwere ike ịdọrọ akụkọ ọkwa weebụ zuru ezu dị ka nke ọma.
Nchịkọta ihe ntanetị nke Semalt na-enye webmaster ike inyocha ohere azụmaahịa ọhụrụ na ikpebi ihe na-arụ ọrụ na mbọ SEO ha na ihe enwere ike ịbawanye elu.
Nchịkọta Semalt nke oru ama ama nke oma ma na enye otutu uzo dika:
Isi okwu na-enye echiche maka isi okwu ọhụrụ maka azụmahịa
Ọnọdụ isiokwu iji soro ọnọdụ isiokwu na ọchụchọ ọchụchọ kwa ụbọchị
Nleba anya ika nke ihe ngosiputa nke weebụsaịtị
Mpempe akwụkwọ ọnọdụ akụkọ ihe mere eme nke na-egosi ọkwa karịa oge
Onye nchoputa nke na-eme ka ndi oru nyocha ihe omimi ya na isi okwu ya
Na nyocha ihe ntanetị nke na-enyocha weebụsaịtị maka nnabata maka omume SEO kachasị mma.
Ndị otu Semalt dị ụbọchị 365 kwa afọ na 24/7 iji nyere ndị ahịa ya aka ịmalite ịhazi onwe ha ma ọ bụ ọrụ SEO zuru ezu ma ọ bụ ọrụ ọ bụla ọzọ ụlọ ọrụ ahụ ga-enye.
Semalt bu onye isi na Kyiv, Ukraine mana ndi otu ya n’uwa dum na-enye nkwado na nkwukọrịta ahịa n’ọtụtụ asụsụ gụnyere Bekee, French, Italian, Turkish na ndị ọzọ.
N'adịghị ka ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-enweghị ezigbo otu, ndị otu Semalt dị mfe ịnweta ma enwere ike izute ha n'oge ọ bụla iji mụtakwuo banyere ọrụ SEO ha, nyocha weebụ, mmepe weebụ, ọrụ okike vidiyo na ọtụtụ ndị ọzọ.
Eziokwu na-akpali mmasị: Semalt nwere anụ mbe na-adọrọ adọrọ mara mma aha ya bụ Turbo nke na-eje ozi dị ka mascot nke ụlọ ọrụ ma biri n'ọfịs. Ọ bụrụ na ị gara leta Semalt n'ọfịs ha na Kyiv, echefula ịkwụsị site na-asị Turbo!
Semalt enyerela ọtụtụ ụlọ ọrụ aka iru ọkwa ọhụrụ nke ihe ịga nke ọma ahịa site n'inweta ọtụtụ okporo ụzọ, melite ahịa ọdịnaya ha, na-enye nkwado maka uto na ọtụtụ ndị ọzọ.
N'ihi ya, ụlọ ọrụ ahụ nwere aha dị ogologo nke ọtụtụ narị ndị ahịa nwere afọ ojuju, ọtụtụ n'ime ha bụ ndị ahịa na-akwụghachi ụgwọ n'eziokwu.
Enwere ike ilele agba akaebe ọ bụla na ngalaba akaebe nke ndị ahịa nke weebụsaịtị Semalt ha, ha na-etinyekwa ihe karịrị vidiyo vidiyo 30+, ihe karịrị akara ngosi 140 + na ihe ọmụmụ 24 zuru ezu, yana ọtụtụ nyocha ndị ọzọ na Google na Facebook.
Semalt ebipụtala ọtụtụ ọnụọgụ ọmụmụ banyere weebụsaịtị ya nke gosipụtara mmụba nke okporo ụzọ n'ihi ojiji nke arụmọrụ SEO ya ma ọ bụ ọrụ SEO zuru ezu. Nke ọ bụla ọmụmụ ya nwere nkọwa ndị ọzọ enwere ike ịgụta site na ịpị ndepụta nke ọ bụla.
Onye ọ bụla nwere mmasị na Semalt's SEO ma ọ bụ ọrụ ahịa ndị ọzọ nwere ike ịga na weebụsaịtị ha iji lelee usoro ọmụmụ ikpe zuru ezu na-egosipụta ịdị irè nke ọrụ ahịa dị iche iche ụlọ ọrụ ga-enye.
Inbanye na Semalt iji kpaa banyere SEO na ọrụ ndị ọzọ dị mfe. Weebụsaịtị ahụ dị mfe ịnyagharịa iji chọta nhọrọ maka Nnyocha SEO efu ma ọ bụ ịmalite iji akụkọ mkpesa mkpesa n'efu.
Semalt na-enye nkwado otu asụsụ ọtụtụ ndị otu zuru ụwa ọnụ na-aza ngwa ngwa maka ajụjụ. Ibido Semalt nwere ike ịbụ ihe dị mfe ịnweta mkpesa arụmọrụ weebụ na-akwụghị ụgwọ ma ọ bụ ịkpọtụrụ otu onye nnọchite anya ha iji nweta njiko SEO ọnụ.